12 चीजहरू तपाईले एक ब्लग पोष्ट लेखे पछि के गर्नु पर्छ
शनिबार, डिसेम्बर 22, 2012 Douglas Karr
हामीले कसरी विस्तृत लेख लेख्यौं तपाईंको अर्को ब्लग पोष्ट अनुकूलन गर्नुहोस्। यो DivvyHQ बाट इन्फोग्राफिक, एक स्प्रिडशिट मुक्त संपादकीय क्यालेन्डर अनुप्रयोग, प्रकाशित पछि तपाईंको सामग्री प्रचार गर्न केहि चरणहरूको माध्यम ले हिँड्छ।
म केवल अलि संकोचको लागि मात्र चीज अन्य ब्लगरलाई तपाईंको सामग्री प्रमोट गर्न भनिरहेको छ। यदि तपाईं महान सामग्री लेख्नुहुन्छ भने, अन्य ब्लगरहरू हुनेछ यसलाई साझा गर्नुहोस् ... मलाई लाग्छ यो सोध्नु अलि अशिष्ट छ। म यो वस्तुको साथ बदल्न सक्छु सशुल्क पदोन्नति। StumbleUpon विज्ञापन को उपयोग, Outbrain, वा अर्को प्रणालीले तपाइँको सामग्री पत्ता लगाउन र साझेदारी गर्न सक्दछ।
टैग: ब्लग पोस्ट पदोन्नतिब्लग पदोन्नतिब्लग पोष्ट प्रचार गर्नुहोस्तपाईंको ब्लग पोष्ट प्रचार गर्नुहोस्
नोभेम्बर २०, २००। 17::2016 अपराह्न
यस ग्राफिक प्रिन्ट गर्न के त्यहाँ एक तरीका छ? मँ यो पोस्ट गर्न को लागी उपयोगी राख्न चाहन्छु।
नोभेम्बर २०, २००। 19::2016 अपराह्न
सायद केवल प्रिन्ट गर्दै वास्तविक ग्राफिक, त्यसपछि CTRL-P प्रिन्ट गर्न! मैले त्यहाँ एउटा लिंक नयाँ विन्डोमा खोल्नको लागि बनाएँ।